Naya Post Nepal | आज (मंगलबार) बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति ?
आज (मंगलबार) बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति ?
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अ’र्थात आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सु’नको भा’उ केही ब\_ढेको छ। सोमबार प्रतितोला ३०० रुपैयाँले घ’टेको सुनको भाउ आज मं’गलबार भने ३०० रुपैयाँले ब’ढेको नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी महासंघले नयाँ पुस्तालाई जा’ नकारी दिएको छ।
महासंघका अनुसार आज छापा’वाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ६०० रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। छा’पावाल सुन सोमबार प्रतितोला रु ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी म’हासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सुनचाँदीको का’रोबार मू’ल्यका आधारमा दैनिक रुपमा सु’न तथा चाँदीको कारो’बार मूल्य तो’क्दै आएको छ।
महासङ्घले सार्व’जनिक गरेको तथ्या’ङ्कनुसार आज तेजाबी सुन को मू’ल्य पनि ब’ढेको छ। आज तेजावी सुन प्रतितोला रु ९१ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार तेजा’बी सुन प्रतितो ला ९० हजार ८०० रुपैयाँमा का’रोबार भ’एको थियो।
यस्तै, सुनको भाउ बढेसँगै आज चाँदी’को भा’उ पनि बढेको छ। महा सङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य प्रति’तोला रु १ हजार २३० रु पैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। सोमबार चाँदी प्र’तितोला रु १ हजार २२० मूल्यमा का’रोबार भएको थियो।
यो पनि ,,रुपन्देहीको देवदह ११ सहदाैनिया निवासी रविन श्रेष्ठले आफ्नो २३ बर्षीय श्रीमती दिलमाया श्रेष्ठको घां’टी थि’चेर ह”त्या गरेको इलाका प्र’हरी कार्यालय धकधईका प्र’हरी नायब निरिक्षक हरि नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दिलमायाका श्रीमान २५ बर्षीय श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीको ह”त्या गरेका हुन्।
ह”त्या गरि पराल भित्र लुकाएर राखेका अवस्थामा श्रीमतीको श’व फे’ला परेको थियो। ।प्र’हरीलाई बिहान ९ बजे मात्रै घ’टनाको बारेमा गाउँलेहरुले जानकारी दिए पनि रातिनै श्रीमतीको ह”त्या गरेको हुन सक्ने प्र’हरीले आकलन गरेको छ।
श्रीमतीको ह”त्या गरे भनरे गाउँमा खु’लेलाम हल्ला गर्दै हिंडेका उनलालई गाउँलेहरू मिलेर प्र’हरीको जिम्मा लगाएको स्थानीय अजय रौनियारले बताए। घरायसी वि”वादका कारण श्रीमतीको ह”त्या गरेको श्रेष्ठले स्वी’कारेका छन्।
श्रीमान रविनको आमालाई उदृत गर्दै प्र’हरीले बताए अनुसार श्रेष्ठ लागु औषधको अम्मली रहेका थिए। दशैंमा अर्घले गाउँपालिका ६ पाल्पा माइत गएकी दिलमाया हिजो मात्रै घर देवदह ११
आएकी थियिन। घ’टना बारे थप अनुसन्धान भैरहेको र ह”त्या आ”रोपी श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भैरहवा लगिएको प्र’हरी नायब निरिक्षक श्रेष्ठले बताए।
यस्तै,द भ्वाइस किड्स कोच तथा गायिका प्रविशा अधिकारीले प्रेमी निर्माण सिटौलासँग विवाह गरेकी छिन् । अघिल्लो आइतबार इन्गेजमेन्ट गरेका गायिका प्रविशा र नि’र्माण सिटौलाको विवहा आज झा’पामै भएको हो ।
भर्चुअल माध्यमबाट लामो समयदेखि प्रेममा रहे पनि निर्माण अमेरिकाबाट काठमाडौं आएपछि मात्र उनीहरूबीच पहिलोपटक भे’ट भएको थियो। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसे र आईटी क्षेत्रमा काम गरेका नि’र्माण दसैंअघि मात्र नेपाल आएका थिए।
२०७८ पुष २७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 152 Views